Fakana an-keriny tao Toamasina - Navelan’ireo jiolahy tao anaty fiaran’ilay karana ny basy PA
Efa-bolana taorian’ny fakana an-keriny an’i Akyl Cassam tale jeneralin’ny orinasa Scim, dia niverina masiaka indray ireo mpaka an-keriny ao Toamasina. Ny zoma 8 jona tokony tamin’ny 6 ora sy sasany hariva, dia karana iray antsoina hoe Nizar Pirbay fantatry ny maro amin’ny anaram-bositra Zouzou tompon’ny tranombarotra P. Business Center ao Toamasina no nisy naka an-keriny. Mpandraharaha ara-toekarena mpikambana ao anatin’ny fianakaviambe Khoja izy io, 44 taona ny lehilahy. Miisa roa ny magazay P. Business Center ao Toamasina izay mivarotra kojakojan-tokantrano karazany maro, dia ao Bazary Be sy eo ampitan’ny Hopitaly Kely. Ity karana ity izay zaodahin’ny solombavambahoaka Naharimamy Lucien Irmah.
La une du 11 juin 2018